Warbaahinta Dalka Kenya Iyo Dilalka Gaarisa? – Rasaasa News
July 13, 2014 – Magaalada Gaarisa ee Goblka Waqooyi barri Kenya, waxaa ka dhacay dilal is daba joog ah. Dilalkaas muddo lagu wareersanaa cida fulinaysa, dilalka waxaa loo gaystay dad ka soo Jeeda Gobalka Soomaalida Ogaadeeniya, kuwaas oo ahaa shacab, qaar ka midana ahaayeen ganacsato.
Warbaahinta dalka Kenya, ayaa xaqiijisay in dilalka dhacay ahaayeen, kuwo laga soo abaabulay dalka Itoobiya. Waxaana dilalkan gaystay dad Soomaali ah oo la aaminsan yahay in ay soo abaabuuleen Maamulka Kililka 5aad ee Magaalada Jigjiga.
Booliska Kenya, wuxuu sheegay in ay hayaan 2 nin oo dilal ka fuliyay magaalada Gaarisa, kuwaas oo soo galay Kenya horaantii Sanaka 2014.
Mid ka mid ah wuxuu sheegay in loo soo diray in ay dilal qorshaysan sameeyaan, oo ay ku bar tilmaameedsanayaan dadka taageera ururka ONLF?
Dadku wuxuu is waydiinaya sababta dibada loogu bar tilaameedsanayo ONLF, marba haday gudaha Ogaadeeniya ay joogaan? Taageerayaasha ONLF, ayaa si weyn falalkan uuga cadhaysan, iyaga oo aaminsan in laga arkay jilacsanaantooda in la bar tilmaameedsado.
Dadka Qurba Joogta ah, ayaa si aad ah u haddal haya dilalkan waxaana la is waydiinaya habka loogu qanciyay wiil Soomaali ah in uu ka goosho Itoobiya yimaadana Gaarisa, isaga oo hadafkiisu yahay in uu dilo mid kalle oo Soomaali ah oo walaalkii ah!
Waa arinta si weyn looga haddal hayo Qurbaha, waxaa sidoo kale aad loola yaaban yahay u jeedada dhabta ah ee laga leeyahay dilalkan iyo cidda wiilashan soo diraysa danta ay leeyihiin? Dadka qaar ayaa ku fasiraya in dilkan laga leeyahay oo kaliya in dagaal Beeleed oo laga abuuro gudaha Ogaden iyo dibadaba! midaas oo lagu fasiray arin aan loo dul qaadan karin waxaana Siyaasiyiinta looga digay in habka noocaan ah uusan ahayn mid si walba loogu qanci karo!
Isku soo duub, dilalkan waa kuwo la aaminsan yahay in ay xaalada cakiran ee Gobalka Ogaden sii fogayn doonta isla markaasna dadka ka soo horjeeda Itoobiya ee aaminsan Gobanimo doonimada ay nacayb sii qaadi doonaan.
Jijiga: Miisaaniyada Kilalka 2014/15-ka oo la Qiyaasay US$320,000,000